Teny avy amin'ny Tonia — Tsara Soratra
Inona tsara no TSARA SORATRA?
TENY FOHY AVY AMIN'NY TONIAN'NY REVIO
HAfatra ho anay
** www.soratra.org **
(Nanomboka Nanandratra ny Asa-soratra Malagasy tamin'ny Taona 2016)
Tonia sy Tale Mpamorona: Mialy Ravelomanana
Tonia Mpanatanteraka: Soamiely Andriamananjara
Tonia Mpanolotsaina: Mamy Rakotondraibe
Tonia Mpanolotsaina: Mainty Kely
Tonia Mpitantsoroka sy Mpanolotsaina: Nalisoa Ravalitera
Azo lazaina fa vitsy ny asa soratra voatonta amin'ny teny Malagasy taorian’ny taona 1980. Ilay teny Malagasy anefa dia hita miroborobo hatrany, ary tsapa koa fa miha-betsaka ny Malagasy no tia sy mahay manoratra. Raha mijery ny isan’ny fikambanan’ny mpanoratra na poeta eto Madagasikara na ny pejy eo amin’ny Facebook fotsiny ianao dia ho resy lahatra fa maro dia maro tokoa no tena tia manoratra. Ny ankabeazan’ny fotoana anefa dia toa very ao anaty kotaban’ny aterineto ireo tena manan-talenta ka tsy dia afaka misongadina loatra. Aiza ny ED Andriamalala, ny Clarisse Ratsifandriahanana, ny Andry Andraina, ny Randriamiadanarivon’ny Taonarivo faha-telo? Iza no kintan’ny literatiora Malagasin’ny taon-jato faha raika amby roapolo?
Ny fanamby manentana ny orinezaka TSARA SORATRA (izay misy ny Takelaka www.soratra.org sy ny Revio Tsara Soratra) dia ny fampiroboroboana ny asa-soratra sy hailaza Malagasy amin’ny teny Malagasy.
Mila ainga vaovao ny hailaza amin’ny teny Malagasy. Ny tanjon’ito orinezaka ito dia ny fanorenana kianja avo lenta (eo anivon’ny aterineto sy an-taratasy) izay:
• Mampiranty ny hakanton’ny asa-soratra amin’ny teny Malagasy.
• Mampisongadina ny fahaizan’ny mpanoratra Malagasy efa kalaza sy manome tosika ireo vao misandratra ahafahany mamirapiratra eo anivon’izany kianja izany ankehitriny.
• Mandresy lahatra ny mpamaky (sy ny mpanonta boky/mpandaha-dohavy) fa misy ary betsaka ny asa-soratra Malagasy mendrika ho vakiany ankehitriny; ary manentana azy mba hamantatra sy hamaky ary hitia izany asa-soratra vaovao izany.
• Mampirisika ny mpanoratra Malagasy mba hampiasa ny Teny Malagasy ho isan’ny teny anoratany.
Ny orinezaka Tsara Soratra dia mahakasika ny mpiombon'antoka rehetra amin’ny teny Malagasy (na ny mpanoratra, na ny mpamaky, na ny mpampianatra, na ny mpamoaka boky, na ny mpivarotra boky, na ny mpikirakira boky).
Takelaka hanangonana asa-soratra voakaly sy manaraka ny fepetra sy fitsipika fototry ny teny Malagasy. Misokatra mandavantoana ny fandraisana sy ny fitiliana lahatsoratra apetraka ao ary afaka manolotra lahatsoratra (na sombin-tantara, na tantara noforonina, na tononkalo, na hadihady fakafaka, na lahatsoratra hafa koa) daholo izay mpanoratra te hanao izany.
Marihina fa tsy ny lahatsoratra rehetra mivoaka ato amin'ny www.soratra.org akory dia hiseho ao amin'ny Revio Tsara Soratra.
Ny Revio Tsara Soratra
Ny Revio Tsara Soratra dia Gazety Literera mirakitra asa soratra maromaro izay heverina fa tena raitra sy mendrika (amin’ny lafiny izay voafaritra mazava) ny ho asongadina amin'ireo lahatsoratra efa mipetraka eto amin'ny Takelaka www.soratra.org na koa lahatsoratra vaovao mihitsy.
Ny Komity Editorialy no hisafidy sy hifantina izay asa-soratra mendrika ny hiseho ao amin’ny Revio Tsara Soratra amin’ireo izay rehetra voaray. Angonina arak’izay azo atao ny lahatsoratra nosoratan’ireo mpanoratra tsapan’ny Komity Editorialy fa ambony lenta sy avo fenitra. Kendrena manokana ny hanome kianja hamirapiratan’ireny mpanoratra azo lazaina fa “diamondra latsaka an-karina” ireny, na irony mba te-kanefa-tsy-tafa irony.
Ny fahombiazan’ny TSARA SORATRA
Azo lazaina fa mahomby ny orinezaka Tsara Soratra rehefa tsapa fa “Sady mitondra asa soratra raitra ho an’ny mpandala, no manolotra sehatra maro mpamaky ho an’ny mpanoratra sangany sy vao misandratra.” Dia samy ho afa-po daholo na ny mpamaky na ny mpanoratra.